ICC oo maanta su?aalo la xiriira dilka dad rayid ah weydiinaysa madaxweyne ku xigeenka Kenya Rutto – Radio Daljir
ICC oo maanta su?aalo la xiriira dilka dad rayid ah weydiinaysa madaxweyne ku xigeenka Kenya Rutto
Seteembar 10, 2013 6:07 b 0
Amsterdam, September 10, 2013 – Magaalada Hague ee dalka Nederland waxaa maanta ka furmaysa dacwada eedeysane William Rutto Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya oo dhowaan halkaas gaaray, dacwada ayaa dhegeysigeeda waxaa si weyn looga wada sugayaa gobolka Barriga afrika gaar ahaan Kenya.
William Rutto oo loo haysto in uu qeyb weyn ka ahaa abaabulayaashii dagaaladii ay dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay dalka Kenya sanadihii 2007 ilaa 2008, kadib doorashadii rabashadaha dhalisay, ayaa waxaa maanta la weydiin doonaa su?aalo badan, iyadoo maxkamada la horgeyn doon cadeymo.
Wararka ay qoreen warbaahinta caalamiga ah ayaa lagu sheegay in dacwada oo bilaabanaysa maanta ay tahay mid culus, iyadoo madaxweyne ku xigeenka Kenya la weydiin doono su?aalo la xiriira, dilka, barakaca iyo dhaawaca dad rayid ah, xili ay dhinteen 1500 oo ruux oo dadka Kenya ah doorashadii 2007 kadib.
Dacwada maanta ka bilaabmaysa maxkamada dembiyada dagaalka ee ICC ee dalka Hollanad, waxaa ay ku soo beegmaysa xili ay Baarlamanka Kenya meel-mariyeen qodob dhigaya in ay Kenya ka baxday Maxkamadaas.
Sidoo kale maanta waxaa maxkamada ICC ee Holland hortegi doona saxafi la yiraahdo Joshua Arab Sang kaas oo u dhashay Kenya kuna eedeysan in uu qeyb ka ahaa kicinta dadka Kenya, ?gaar ahaan qabiilka Kilinjing ee uu ka soo jeedo, waxaa la filayaa weriyaha isagana in su?aalo la xiriira dhibaatooyinkii Kenya la weydiin doono iyo weliba dacwada loo haysto.
Madaxweynaha Kenya Uhurru Kenyata ayaa la filayaa in uu isna hortago Maxkamada dembiyada dagaalka ee ICC bisha Novermber, kadib markii uu dalbaday in wakhtiga loo kala bedelo isaga iyo Madaxweyne ku xigeenka William Rutto, maadama aysan dalka halmar ka wada bixi karin, dadka gobolka gaar ahaan Kenyaanka ayaa il-gaar ah ku haya dacwada William Rutto.
Baahin: Salaasa, 10 Sep 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe
Xog-haynta cusub ee degmada Buurintle oo ka hadlay howlo shaqo oo ay qaban doonaan (Dhegeyso)